कोरोनाबाट जोगाउनका लागि थप दुई जीवनरक्षक औषधि भेटिए « Naya Page
काठमाडौं, २४ पुस । कोरोना संक्रमणले जकडेका बिरामीको ज्यान बचाउनका लागि थप दुई जीवन रक्षक औषधि भेटिएको दाबी गरिएको छ । यी औषधी कोरोना संक्रमितको मृत्युदरमा एक चौथाई कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ ।
बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) को इन्टेन्सिव केयर युनिट (आइसीयू) मा यी भ्याक्सिनको ट्रायल गर्ने अनुसन्धानकर्ताले यी औषधि खोपमार्फत् दिइने र उपचार गरिएका हरेक १२ जनामध्ये थप एक जनाको ज्यान बचाउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
दुबै औषधी उत्तिकै असरदार छन् । र यो सस्तो एस्टेरोयड डेक्सामेथासोनसँग अझ बढी असरदार छ । यद्यपि, औषधि सस्तो छैन । यसको मूल्य प्रति बिरामी ७५० पाउन्ड (१ लाख १९ हजार रुपैयाँ) देखि १००० पाउन्ड (१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ) को बीच आउँछ जुन डेक्सामेथासोनको पाँच पाउन्ड (लगभग ८ सय) को कोर्सभन्दा कयौं गुणा बढी छ ।
यद्यपि, विशेषज्ञका अनुुसार यी खोप लगाउनुको फाइदा यो हो कि यो आइसीयूमा प्रतिदिन हुने बेड खर्चभन्दा कममा उपलब्ध छ । आइसीयूको प्रतिदिन शुल्क २००० पाउन्ड (३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) छ । मुख्य शोधकर्ता तथा इम्पेरियल कलेज लण्डनका प्रा. एन्थनी गार्डोनले भने, ‘हरेक १२ बिरामी जुन यी औषधीबाट निको हुनेछन्, उनीहरुले एउटा जीवन बचाउन सक्नेछन् । यो निकै प्रभावकारी छ ।’
एनएचएसका नेशनल मेडिकल डायरेक्टर प्रा. स्टिफन पाविसले भने, ‘कोरोना बिरामीको मृत्युको आँकडामा कमी ल्याउनका लागि अब अन्य औषधी पनि आइसकेका छन् । यो निकै खुसीको कुरा हो र कोरोना भाइरसविरुद्ध लडाईंमा एक सकारात्मक कदम हो ।’